Dowladda Kenya oo sheegtay inaysan faahfaahin dheeri ah ka haynin Kenyaati ay Kooxda Alshabaab soo bandhigtay – idalenews.com
Dowladda Kenya oo sheegtay inaysan faahfaahin dheeri ah ka haynin Kenyaati ay Kooxda Alshabaab soo bandhigtay
Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Kenya, Yuusuf Xaaji ayaa shaaciyey in ragga Kenyaatiga ee ay Kooxda Alshabaab ku goodisay inay dili doonaan aysan ahayn Maxaabiis Dagaal.
Wasiirka ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi uu siiyey Shabkadda Sabahi, waxa uu sheegay inaysan faahfaahin dheeri ah u haynin La-haystayaasha Kenyaatiga ee ay Kooxda Alshabaab Video ahaan bishan 23-da ugu soo bandhigeen Bartooda Twitter ee haatan hawada laga saaray.
Wasiirku, waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo Qorshaha Dowladiisa ku aadan La-haystayaashaasi, wuxuuse ugu baaqay Kooxda Alshabaab inay ai shuruud la’aan ku soo daayaan Kenyaatiga ay haystaan, isagoo xusay inaysan La-haystayaashaasi ahayn Maxaabiis Dagaal, balse ay yihiin shaqaale rayid ah.
Mar uu ka hadlayey weerarkii gaadmadda ee ay Kooxda Alshabaab sannadkii hore ku soo qaadeen duleedka Degmadda Wajeer, waxa uu sheegay inay Kooxda Alshabaab dileen lix qof oo ay ku jirtay qof dumar ah, wuxuuna magacyadda Marxuumiinta lagu dilay weerarkaasi ku kala sheegay;- Saddex Alifle Bolis Xasan Barre, Paul Karanja, Wilson Ng’are oo Saraakiil ahaa, Abdullahi Mohamed Abdi oo ka tirsanaa Boliska Kaydka ah , Julius Gittongo oo Macallin Dugsi Hoose ahaa iyo Haweney la oran jirey Nuurto Hassan Mohamed.
‘Waxaan ognahay oo keliya inay Kooxda Alshabaab bishii January 12th ee sannadkii hore labo Sarkaal oo ka tirsan Dowladda Kenya ka soo qafaasheen Deegaanka Gerille oo 100-Km u jirtaa Degmadda Wajeer’ ayuu yiri Wasiirka, oo dhinaca kale xusay inaysan wax macluumaad u haynin afarka Kenyaatiga ee ay Kooxda Alshabaab sawirkooda soo bandhigtay.
Wuxuuna Saraakiisha Dowladda Kenya ee Video Alshabaab sii daysay ka muuqday uu magacyadooda ku kala sheegay Yesse Mule Edward iyo Fredrick Trungo Wainaina.
Kooxda Alshabaab ayaa ugu baaqday Dowladda Kenya inay Maxaabiista Islaamka ka si idaayaan Xabsiyadooda, haddii kale ay dili doonaan ragga ay gacanta ku hayaan.
Ra’isul-wasaaraha Kenya, Raila Odinga, ayaa ku gacan-sayray shuruurdaha Alshabaab, isagoo sheegay inaysan marnaba wada-xaajood la geli doonin waxa uu ugu yeeray Koox Argagixiso Caalami ah.
Kooxda Alshabaab, ayaa muddo 3 isbuuc ah u qabatay Dowladda Kenya oo ku ekeen doonto bisha soo socota ee February 14-da, waxayna Kooxda ku hanjabtay in wixii ka dambeeya xilligaasi dili doonaan La-haystayaasha Kenyaatiga ee ay haystaan.
Dhinaca kale, Samson 0musula oo ah La-taliye dhinaca Amniga, kuna sugan magaalladda Nairobi ayaa u sheegay Shabakadda Sabahi inay Dowladda Kenya ku khasban tahay inay Ergo isugu jirta Odayaasha Bulshadda iyo Hoggaamiyayaasha Diinta u diyaariso si ay Kooxda Alshabaab kala xaajoodaan sidii loo sii dayn lahaa La-haystayaasha gacanta ugu jira Kooxdaasi.